PDF XCHANGE VIEWER 2.5.322.8 RINDRAMBAIKO MAIMAIMPOANA - PROGRAMME REVIEW - 2019
Maro ny mpahary mamorona indraindray no mieritreritra ny mamorona ny endriny manokana. Mba hanaovana izany, tsy ilaina ny manosika tarehintsoratra tsirairay amin'ny taratasy, satria misy fitaovana maro samihafa rindrambaiko, iray amin'ireo dia FontForge.
Ao amin'ny programa FontForge dia misy fitaovana mahagaga mahavariana hamoronana karazan'olona rehetra.
Tena ilaina ny fitaovana iray mba handrefesana ny isa isan-karazany ao amin'ny fizarana voafaritra amin'ny sary.
Tena tsara ny fahafahana mampiova haingana ireo tarehintsoratra voasokitra, izay ahafahana manao fanovana maro, raha ilaina, avy hatrany.
Ho an'ny olona manana traikefa amin'ny programa, ny FontForge dia afaka manova tarehintsoratra amin'ny alalan'ny fampidirana mivantana ny baiko na amin'ny famoahana rakitsoratra efa vita vita pirinty ao Python.
Raha tsy azonao antoka ny fahamarinan'ny asanao ary maniry ny tsy fanavakavahana, dia afaka manamarina io programa io.
Ankoatra izany, ao FontForge, azonao atao ny mametraka ny mari-pamantarana lehibe rehetra ao anaty fonosana, izay ahafahan'ny rafitra manendry azy amin'ny sokajy manokana.
Hizaha sy hanova endritsoratra mivantana
Raha te hanova ny fonosana hita ao amin'ny ordinatera ianao, dia azonao atao amin'ny FontForge mora izany.
Ny fanehoana sary dia mampiasa ny fitaovana izay ampiasaina hanamboarana endritsoratra manokana.
Famonjena sy fanontana
Rehefa vita ny asany amin'ny endritsoratra tsy manam-paharoa, dia azonao atao ny mamonjy azy amin'ny iray amin'ireo format mahazatra manohana azy.
Ankoatra izany, azo atao ny manonta ny antontan-taratasy hita.
Maro ny fitaovana;
Fanohanana amin'ny teny Rosiana.
Tsy dia mampifanaraka loatra ny aterineto, mizarazara ho an'ny varavarankely samihafa.
Ny programa FontForge dia fitaovana tena tsara ho an'ny fanoratana ny endritsoratra manokana sy manamboatra azy. Tsy manana fepetra mafimafy kokoa noho ny mpifaninana, fa maimaim-poana tanteraka.
Famoronana rindrambaiko fanoratana Type Scanahand FontCreator
FontForge dia programa maimaim-poana maimaim-poana hamoronana endritsoratra efa vita pirinty miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany izay manome vokatra tena tsara.
Mpamorona: George Williams